Yaa ka qaman Spain iyo Italy , Italy oo shax cusub qorsheyneysa, ogoow xog badan oo kusbaasan kulanka isreebreebka koobka aduunka ee Caawa ?
Friday, July 20th, 2018 - 00:05:27
Saturday September 02, 2017 - 10:15:54 in Wararka by Kubad Bile
Xulka Talyaaniga ayaa lagu wadaa inuu caawa kusoo shartago shaxciyaareedka 4-2-4 kulanka ay ka hortagayan Xulka Spain, iyado kasoo muuqan doonaan Lorenzo Insigne, Antonio Candreva, Andrea Belotti iyo Ciro Immobile.
Kaulanak isreebreebka koobka aduunka ee caawa ka dhici doona Santiago Bernabue waxuuna bilaaban doona 9:45.
Giorgio Chiellini ayaa dhaawac dhana Kubka ah ku seegi doona kulanka, waxayna la macno tahay in daafacyada BBC loogu magic daray I aysan kasoo muuqan doonin Xulka Azzuri.
Qaab ciyaareed kala duwan ayuu tababarka ku tijabinayay tababare iampiero Ventura sii u u helo shax rasmi ah uu kaga hortago xulak Spain, waxaana qeyb ka ahaa 3-4-1-2 oo uu Marco Verratti ninka weerarka ka dambeeya.
Sikastaba waxay tani meesha ka saareysaa laacibka bandhi ciyaareedka wanaagsan lasoo baxay ee Insigne.
3-4-3 waa qaab kale uu Ventura doobidi karo , iyadoo daafca Juventus Daniele Rugani uu saddexda daafc kula biirayo Andrea Barzagli iyo Leonardo Bonucci, taasoo Andrea Conti iyo Matteo Darmian u dhaqaajineysa dhanka garbaha.
Haddii ay dhacdo waxaa safka hor ekusoo bilaaban kara Insigne o ay wehlinayaan Candreva iyo Belotti, waxaana keydka u dhici dppna Immobile.
Wararku u dambeeyay ee macalin Ventura ayaa tibaaxaya in uu ciyaari doona shaxda 4-2-4, taasoo Conti yo Darmian ay ciyaari doonaan daafacyadooda buuxa.
Labada xul aya leh min 16 dhibcood,waxuuna Talyaanigu doonaya inuu guul gaaro si uu kalinta koowaad u helo.
Spain ayaa dhankooda ku xisaabtamaya garoonkooda Santiago Bernabue waxayna ilaasahn doonaan hogaanka ay Italy xagga faraqa goolasha kaga hayaan, waxaan si toos ah Russia 2018 u xaadiri doona xulka kaalinta koowaa kusoo baxa halka kan labad kusoo baxa uu dagaal kale u gali doono soo bixidiisa.
Labada koox ayaa 6 Oktoobar 2016 ku kulmay Italy waxayna isku mari waayeen 1-1.
Xulka Spain ayaa dhankooda isticmaali doona shaxda no-9-ka beenta ah, Maqnaanshaha Diego Costa Awgii waxayna heeystaan Alvaro Morata.
Weerarka waxaa hogaamin doona David Silva oo ay wehliyaan Marco Asensio iyo Isco.
Xulka Spain ayaan wax guul heer tartan ah ka gaarin Italy tan iyo Euro 2012.
Labada dal ayaa taariikh ahaan kulmay 32 kulan , Spain 11 jeer adkaatat 9 Italy halka ay barbaro galeen 12 jeer .
Safafka la filan karo